ပရိသတ်တွေကို ခဏတာ ဆွံ့အသွားစေမယ့် နေခြည်ဦးရဲ့ တကယ့်အမိုက်စား အဝတ်စားအခန်းကြီး
Beauty Blogger နေခြည်ဦးလေးကတော့ သူမရဲ့အလန်းစား အဝတ်အစားလဲခန်းနဲ့ပရိသတ်ကြီးကို မိတ်ဆက်ေပးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတော်တော်များများရဲ့ အားပေးမှုတွေကို ရရှိထားတဲ့ နေခြည်ဦးကတော့ ယခုအချိန်မှာ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ လျှောက်လှမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတော်တေ်ာများများရဲ့အိပ်မက်တွေကို ရရှိထားတဲ့ နေခြည်ဦးကတော့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝလေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ ဒီတခါမှာတော့ နေခြည်ဦးက မိန်းကလေးတော်တော်များများရဲ့ အိပ်မက်ဖြစ်တဲ့အဝတ်အစားလဲခန်းကြီးကို ပရိသတ်တွေဆီချပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
Beautybynaychi: နေခြည့် အဝတ်အစားလဲခန်း ထဲသို့ အလည်တစ်ခေါက် ??????
နေခြည်အခု ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေတဲ့ စိတ်ကူးထဲက အခန်းလေးက အခုဆို ၉၀% လောက်ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ ???၁၀၀% ပြီးတဲ့ အထိစောင့်ရင်ဒီထက်ကြာသွားမှာ စိုးလို့ရယ် ပြီးတော့ ဒီကြားထဲလည်း ခရီးသွားစရာရှိလို့ နေခြည် ဒီနေ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ blog post လေးအရင်တင်ပေးလိုက်တယ်နော်။ ??????
မိန်းကလေးတော်တော်များများက အလှအပကို ဒီခေတ်မှာ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်ဆိုတာ အားလုံးလည်း သတိထားမိမှာပါ။ ???beauty industry ကြီးက ကြီးမားလာတာနဲ့အမျှ fashion industry ကြီးကလည်းအနောက်ကနေ တစ်ဟုန်ထိုးလိုက်လာတာပါဘဲလေ။ ?
ကိုယ့်ကိုယ်ကို makeup blogger လို့ခံယူထားတာမဟုတ်ဘဲ beauty blogger လို့ခံယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် နေခြည့်ရဲ့ blog page လေးက မိတ်ကပ်တစ်ခုထဲသွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အကုန်သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအလှအပထဲမှာနေခြည်ဝါသနာပါတာ စိတ်ဝင်စားတာ fashion လဲပါဝင်ပါတယ်။ ?? အခုဆို နေခြည်တစ်နှစ်လောက်နီးပါး အစီအစဉ်ဆွဲပြီး လေးလလောက် အချိန်ပေးခဲ့ရတဲ့ beauty bloggers တွေရဲ့စိတ်ကူးထဲက အခန်းလေးနဲ့ walk-in closet လေးကအခုဆိုတော်တော်လေးပြီးသွားပါပြီ။ ??
အရမ်းလည်း စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိသလို အားအင်အသစ်တွေလည်းပေးပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကဆို မိဘကို လိုချင်တာကို မရရ ရအောင်ဝယ်ခိုင်း ပူဆာတတ်တဲ့ spoilt နေခြည်ဦးလေးက အခုဆို ဒီလို beauty blogger လုပ်ဖို့ဖြစ်လာမယ်လို့
အခုဆို နေခြည်လိုချင်တဲ့ စိတ်ကူးလေးလည်းပုံဖော်နိုင်ခဲ့ပြီ။ ဒီအခန်းလေးက နေခြည့် walk-in closet လေးဆိုလည်းဟုတ်တယ်၊ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ studio လေးဆိုလည်းဟုတ်တယ်၊ ဘဝငယ်လေးတစ်ခုဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီအခန်းလေးမှာ နေခြည်နောက်ဆို တောက်လျှောက် fashion နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ vlog တွေ အများကြီး တင်တော့မှာဆိုတော့
နေခြည့်ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ဒီ personal blog page လေးကို see first လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။???
နေခြည်ဒီအခန်းလေးကို စိတ်တိုင်းကျ ဒီဇိုင်းတွေရှာ reference တွေရှာပြီး နေခြည့်မိတ်ဆွေ construction company ဖြစ်တဲ့ Double H & Associates Development Co.Ltd ကိုပြင်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ နေခြည် ဂျီကျသမျှ
ကို မငြီးမငြူ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ပြီးဆုံးသည်အထိ လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ Double H ကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ နေခြည့်အခန်းက ရှိပြီးသား အခန်းဟောင်းကို အားလုံး ဖြိုချ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် နေခြည့်ကုန်ကျမှု ပြင်ဆငိစရိတ်က အသစ်ပုံဖော်မယ့်သူတွေနဲ့ မတူနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီလိုပြင်ဆင်ချင်တယ် ဘယ်လောက်လောက်ကျမလဲ သိချင်ရင်တော့ ဒီ company ကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။
အခု နေခြည့်တင်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့တင် ကြွေနေပါပြီဆို ??vlog video လေးသာ တင်ပေးလိုက်မယ်ဆို ဘယ်လောက်တောင် ဝမ်းသာမလဲ သိချင်ပါဘိနော်။ ???ပြီးရင် မိန်းကလေးတိုင်းကို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားသွားစေမယ့် giveaway အကြီးကြီးတစ်ခုကိုလည်း ?????? vlog တင်ပေးတဲ့အခါ ပြောပြပေးသွားဦးမှာပါ။ အဲ့ giveaway ကိုပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အခု ထဲက ဒီ photo post လေးကို share ထားပေးဖို့လိုပါတယ်လို့ တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောလိုက်တယ်နော်။ ??
ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ မိန်းကလေးတွေ မိနစ်အတော်ကြာအောင် နေခြည်ဦးရဲ့ အဝတ်အစားလဲခန်းကိုကြည့်ပြီး ကြွေနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။We Love Cele
Photos & Source-Nay Chi Oo
သီတင်းကျွတ်လာကန်တော့ကြမယ့် ကောင်မလေးတွေကို သတိပေးလိုက်တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
တည်ထောင်ထားသော လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကြီးကို စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် ပိတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့ အောင်သော်